Ungasusa kanjani izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ku-App Store | Izindaba zamagajethi
Uma usebenzisa njalo amadivayisi we-iOS, kungaba yi-iPhone, i-iPad noma i-iPod Touch, besilokhu sithanda ukuhlola izinhlelo zokusebenza. Eziningi zazo zihlala kuphela imizuzwana embalwa kudivayisi, kepha umkhondo wayo uhlala unomphela emlandweni wethu wokuthenga we-App Store.
Njalo uma siya esigabeni sokuthenga, lapho sizothola izinhlelo zokusebenza ezinhle ebesizihlola ngokuhamba kwesikhathiYize bethengwe iminyaka futhi bebabi kangako, bebezowasusa esitolo sohlelo lwe-Apple.
Ngeshwa asikwazi ukususa izinhlelo esizithengile kwirejista ye-Apple. Singafihla kuphela izinhlelo zokusebenza ezingafuneki ukuze zingaveli futhi ohlwini Lokuthengiwe. Nakhu ukuthi ungazifihla kanjani izinhlelo ezingafuneki ukuze zingaveli kuleso sigaba futhi.
Okokuqala siphendukela kufayela le- Isicelo se-iTunes.
Sibheke phezulu Isitolo seTunes, etholakala ngakwesokudla ngaphezulu kwesikrini.
Ngakwesokunene nangaphansi kwesihloko esithi Links, sizothola izinketho eziningi phakathi kokukhetha Kuthengiwe ukuthi kufanele sicindezele ukufaka isigaba lapho kukhonjiswa khona uhlu lwazo zonke izinhlelo zokusebenza esizithenge ngokuhamba kwesikhathi nge-Apple ID yethu.
Esigabeni esithengiwe, siya kuzinhlelo zokusebenza, eziphakathi koMculo nezincwadi ukukhombisa izinhlelo zokusebenza esizithengile. Futhi uma sifuna, singahlunga, kuya ngohlobo lwesicelo, kungaba nge-iPhone noma i-iPad futhi uma uhlelo lokusebenza lulandwa kulabhulali yethu noma nje ukuthi konke kuyakhonjiswa.
Siya esicelweni esifuna ukusifihla futhi chofoza ku-X ozovela ekhoneni eliphezulu kwesobunxele lohlelo lokusebenza. Uhlelo lokusebenza luzonyamalala ohlwini futhi ngeke lusakhonjiswa nge-iTunes noma ku-iDevices yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungazisusa kanjani izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ku-App Store
Kunguqulo engu-12.1.1.4 ye-iTunes, ukudlikiza okubonisiwe akuveli
fihla isicelo njengoba kukhonjisiwe lapha kepha kusabonakala ocingweni lwami: S
Kuthiwani uma i-x ingaveli ku-iTunes?
Yize u- "X" engabonakali, usesekhoneni elingenhla esinxeleni kodwa ngendlela efihliwe. Cindezela kuleyo ndawo futhi uzobona ukuthi uhlelo lokusebenza lunyamalala kanjani.
I-x ayiveli futhi ayisuswanga
Lokhu kudala ukuthi ingabe isavela kuma-iTunes, kepha isabonakala ngaphansi kokuthi "Okuthengiwe - Hhayi kule iPhone" ku-iPhone. Kepha kungenzeka kanjani ukuthi inketho elula KANYE NE-ABSURD njengokususa izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ongasazifuni nhlobo ingafakiwe?
Ngiyabonga mngani. Kwenzeke kimi njengabanye ababhala ngaphambili ukuthi ngakufihla kodwa (ngaphandle kokunqamula i-ipod kwikhompyutha) kwakusabonakala. Ngemuva kokuthi ngivale i-iTunes futhi nginqamula i-iPod, izinhlelo zayeka ukubonakala.
Ukubingelela nokubonga okuningi
Ungayihlela kanjani i-imeyili ye-Gmail ezothunyelwa ngosuku oluthile